5MB Attachment — MYSTERY ZILLION
May 2007 edited May 2009 in Project
MMGLITE တွင် Attachment5MB အထိ တိုးမြင့်ထားပါတယ်...
5MB ထိတော့ခွင့်ပြုထားပါတယ်.. :69:
တကယ်တော့ များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်.. နောက်ပြီး ကျွန်တော့်လက်တွေ့အရနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်..
G-lite တိုင်းက ဘယ်လောက်ပဲ attachment များများ အလွန်ဆုံး 1 MB ပဲပို့လို့ရတယ်.. 1MB ထက်ကျော်သွားရင် attachment ကပါမသွားဘူး..
ရပါတယ်... ညီရ... ဘာဖြစ်လို့လည်းဆို 1 MB ဆိုတာက glite က coding ပိုင်းမှာ 1MB ပဲတင်ခွင့်ပေးထားတယ်... အခု5MB ထိအစ်ကိုပြောင်းလိုက်တာ... စမ်းကြည့်ပေါ့... ရမရကို..\_:D/
သိပ်ကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ :1:
2 MB ကျော်တောင်ရတယ်.. Gmail အစစ်နဲ့ ပို့တာ များသောအားဖြင့် connection Error 007 ဆိုတာတို့ unable to reach, pls check your internet connection ဆိုတဲ့ error တွေ တွေ့နေရတယ်.. ခဏခဏဖြစ်တတ်တာလေးတွေပါ.. ဘာမှ attach မပါလဲဖြစ်တတ်တာပဲ..
mmglite ကရတယ်.. connection လဲ မအောက်သွားဘူး \_:D/ attachment လည်းပါသွားတာပဲ အဲမြန်မာနိုင်ငံ connection အရတော့ စောင့်သင့်သလောက်စောင့်ရတာပေါ့.. စောင့်ရတယ်ဆိုတာကလဲ ရိုးနေပါပြီ.. အကျင့်တောင်ဖြစ်နေပြီ..
အဲ.. တစ်ခုပြောအုံးမယ်.. ကျွန်တော့်မေးထဲကို တစ်မိနစ်ကို spam2ကောင်လောက်၀င်တယ်... တစ်ရက်မစစ်ဖြစ်ရင်သွားပြီ.. ဆိုလိုချင်တာက spam တွေကို နေ့တိုင်းဖျက်တယ်.. ဒါပေမဲ့ spam ပဲ ဖြစ်ဖြစ် inbox ထဲက မလိုချင်လို့ ဖျက်တာဖြစ်ဖြစ် delete နှိပ်လိုက်ရင် ရပ်ရပ်သွားတယ်.. refresh လုပ်တယ်.. inbox တို့ဘာတို့ ပြန်မတက်လာတော့ဘူး.. စာမျက်နှာအဖြူကြီးမှာ ရပ်သွားတာ... တစ်ခါတစ်လေ ပျက်
အရင်ကပြောမလို့ မပြောဖြစ်ဘူး.. ပြင်လို့ရရင် ပြင်ပေးပါနော် အစ်ကို... ဘယ်လို ကြောင့်လဲ ရှင်းပြနော်.. အသိတိုးတာပေါ့..
Gmail က AJAX နည်းပညာ သုံးထားလို့ပါ.. connection ကောင်းမှ AJAX က သုံးလို့ကောင်းတာ.. connection မကောင်းရင် သုံးရတာမမိုက်ဘူး... Spam အတွက် filter လုပ်လိုက်လေ.. ရောက်လာတဲ့ mail မှာ unsubscirbe မပါဘူးလား... ပါရင် လုပ်လိုက်ရင် mail မလာတော့ဘူး...
ညီပြောတာ အစ်ကိုသိတယ်.. delete လုပ်လိုက်ရင် အဲလိုဖြစ်တယ်... အစ်ကိုလည်း ကြိုးစားပြီးပြင်ဘူးတယ်.. မရဘူးကွ... ပို့လိုက်တဲ့ querysting များလွန်းလို့... နောက်ပြီး encode လုပ်တာနည်းနည်းများလို့ဖြစ်သွားတာ... ပြင်လို့ရရင်တော့ ပြင်တာပေါ့... ကြိုးစားကြည့်လိုက်အုံးမယ်..
Hanson wrote: »
ကျွန်တော် Glite ထဲက Code တွေကို ပြင်ဖို့၀င်သွားတာ ဘာမှ နားမလည်ဘူး:D
လည်ထွက်သွားတယ်။ ကိုစေတန်လိုပဲ Home Page မှာ စာတွေ ထပ်ရေးချင်တယ်။
နောက်, အထဲစာတွေကောပဲ ဥပမာ -
ကိုစေတန်ပြင်သလိုမျိုး Compose ကို စာပို့ရန် (သို့) စာရေးရန် အဲ့လိုမျိုးပေါ့။
အဲ ကျွန်တော့် Glite Address ကတော့ --> http://khunmk.joolo.com
၈ျီလိုက် ကို ၀င်ကြည့်တယ်..ဆိုင်းအင်လုပ်လိုက်တိုင်း ..ပတ်စ၀ပ်နဲ့..အကောင့်အမည်က ..do not much ဆိုပြီးပြနေတယ်.. ဘယ်နေရာမှာမှ ၀င်လို့မရဘူး...သေသေချာချာလဲကြိုးစားကြည့်ပြီးပါပြီ..font လဲ မမှားဘူး ..ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပြောပြပေးပါ..
simplejunior wrote: »
@googlemail.com လား.. ဒါမှမဟုတ် @gmail.com လား...
@gmail.com ထည့်ရင်တော့ ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ရှေ့က နာမည်နဲ့ပဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ [email protected] ဆိုရင် yourname နဲ့ပဲဝင်ပေါ့
ဟိုတစ်ခါ စမ်း၀င်ခိုင်းကတည်းက ခုထိကို login ၀င်လို့ရသေးဘူး :106:
Signin failed. Gmail connection error. Try again afterafew minutes.
name နဲ့ဘဲ၀င်တာပါ ..ကိုစေတန်ရေ..@gmail.com မရိုက်ထည့်ပါဘူး..ဒါပေမယ့်
user name နဲ့ဘဲ၀င်တာပါကိုစေတန်ရေ..
ဟုတ်လားဗျ။ Firefox ဆိုရင် Tool > Clear Private Data လုပ်ပြီး ဝင်ကြည့်ပေးပါလား။ Private Data တွေတော့ အကုန်ဖျက်လိုက်ပေါ့... အဓိကဖျက်ရမှာက Cache , Cookies, Sessions တို့ပါ။ အဲလိုလေး စမ်းကြည့်ပေးပါ...
မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ Clear Private Data လုပ်ပြီး ပြန်စမ်းကြည့်ပါလား။ အရင် version အဟောင်းက glite သုံးဘူးလို့ အဲလိုဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်။ ဒါနဲ့ မူရင်း gmail မှာတော့ ဝင်လို့ရတယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရကို ရရမယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော်စမ်းခိုင်းထားပြီးပြီ။ အကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာ ကျွန်တော် release လုပ်လိုက်တာပါ။ :106: ဘာပြသနာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး... :2:
ကျွန်တော့ glite မှာလည်း log in ၀င်လို့မရဘူးဘာတွေလိုနေတာလဲ...glite အသစ်downရမယ်ဆိုရင်လဲlink လေးရှယ်ပေးကြပါ
kkawave wrote: »
http://www.mysteryzillion.com/forums/showpost.php?p=2779&postcount=4 အဲမှာ ပြောပြထားပြီးသားပါ။
ဒီနေ့လဲ ..ကိုစေတန်ဖြေကြားသမျှလေးတွေ..လိုက်လုပ်ပြိး ..
ထပ်စမ်းကြည့်မိသေးတယ်...khunmk ရဲ့ ဂျီလိုက်ကို ၀င်ကြည့်
ဟုတ်ကျေးဇူးအထူးတင်တယ်အကိုရေ့ con အတက်အကျဖြစ်လို့ attach အတွက်
စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့. မျုားသောအားဖြင့်တော့ glite သုံးပြီဆိုတာနဲ့ mz သည်သာ
မရဘူးဗျ။ ဟိုးအရင်ကတခါဝင်ကြည့်တယ်။ ကို DBA လို error ပြတယ်။ အဲတုန်းက MZ က glite ဖြုတ်လိုက်ပြီထင်နေတာ။ ခုလဲဒီ error ပဲ။ ဘန်းကျော သီးသန့်များဖြစ်နေလေတလား :P:P